सीप र क्षमता भएका नेपालीलाई कतारमा अवसर नै अवसर छ::Daily Newspaper of Nepal
सीप र क्षमता भएका नेपालीलाई कतारमा अवसर नै अवसर छ
व्यवसायी तथा सञ्चालक
मण्डला रेष्टुरेन्ट, दोहा कतार
जन्मभूमि नेपाल भएपनि तीर्थ कार्कीका लागि कतार कर्मभूमि बन्यो । जहाँ एउटा सफल व्यवसायीको परिचय बनाएका छन् कार्कीले । स्थायी घर पुरानो नैकाप, काठमाडौं भएका कार्की हाल कतारमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीको रूपमा चिनिन्छन । करीब एक दशकको कतार बसाईमा कार्कीले कतारलाई नजिकबाट बुझेका छन् । व्यवसाय नै आफ्नो खास परिचय बनाएका कार्कीसँग लाखौं नेपालीहरुको कर्मभूमि बनेको कतारमा नेपालीहरुको व्यवसाय, नेपाली कामदार तथा कतार भित्रको नेपालबारे जनसवाल दैनिकले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
कतार कहिले केको सिलसिलामा आउनुभएको थियो ?
खासमा म सन २०१० मा कतारमा सेल्सम्यानको रूपमा एउटा मोबाइल कम्पनीमा काम गर्ने सिलसिलामा आएको थिए । लगभग ६÷७ वर्ष लगातारमा निरन्तर काम गरेपछि व्यवसाय गर्ने अर्थात् व्यवसायी बन्ने हुटहुटीले उत्प्रेरित गरेपछि जागिर छाडेर कतारमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सुरुवात गरे । काम गरिरहँदा व्यवसाय गर्ने निर्णय गरेर लागिपर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेछ । मलाई त्यही निर्णयले अहिले एउटा सफल व्यवसायी बनाएको छ । र अहिले मैले बुझेको छु– व्यवसाय भनेको व्यवसाय नै रहेछ ।
कतारमा यहाँले कुन रेष्टुरेन्ट चलाउनु हुन्छ ?
हाम्रो रेस्टुरेन्ट पुरै अथेन्टिक टिपिकल नेपाली फुडहरू पाइने शुद्ध नेपाली रेस्टुरेन्ट हो । हाम्रो रेस्टुरेन्टको नाम मण्डला हो । हाम्रो रेस्टुरेन्ट दोहा कतारमा छ । हामीसँग लोकल चिकेन, थकाली खाना, सेलरोटी, छोयलाहरु, मःमका विभिन्न भेराइटीहरु, नेपालका विभिन्न समुदायका खानाका परिकारहरु, नेपालका सांस्कृतिक फुडहरू आदि छन् । जसले गर्दा, हाम्रो रेस्टुरेन्टको आफ्नै युनिकनेस रहँदै आएको छ ।
यहाँको रेस्टुरेन्टको विशेष विशेषता के हो ?
यहाँ दोहा कतारमा लगभग २०÷२५ वटा नेपाली रेस्टुरेन्टहरू छन् । ती मध्ये हाम्रो रेस्टुरेन्टको प्रमुख विशेषता भनेको हाम्रो रेस्टुरेन्ट २४ सै घष्टा खुला हुन्छ । र, हाम्रोमा विशेष गरेर नेपाली टिपिकल परम्परागत एवं सांस्कृतिक खानाका परिकारहरू बन्छन । जसले गर्दा नेपाली तथा विदेशीहरू विशेष चासोका साथ हाम्रो रेस्टुरेन्टमा खान आउँछन । हामीसँग आधुनिक प्रविधियुक्त सेवाहरू छन् । जस्तै– अनलाइन एपहरू छन् । अनलाइनबाटै आफ्नो रुचिको फुड अर्डर गर्न सकिन्छ । साथै, जुनसुकै समयमा निःशुल्क होम डेलिभरी सेवा पनि हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौ । र, हाम्रो सेवा पनि एकदमै छिटो छरितो र भरपर्दो छ । हाम्रो रेस्टुरेन्टमा अरु भन्दा विशेष विशेषताहरू रहेका छन् ।
व्यवसाय कस्तो चलिरहेछ ? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त आफ्नो रोजाइको व्यवसायमा ?
म व्यवसायमा सन्तुष्टि र आर्थिक समृद्धिकै लागि लागिपरेको हो । सोही अनुसार बहुतै कडा मेहनत पनि गरे । सकेसम्म राम्रै व्यवस्थापन गरिरहेको छु । जसले गर्दा व्यवसाय राम्रै चलिरहेको छ । नाकाबन्दीपछि हल्का व्यापार घटेको भए पनि समग्रमा व्यापार सन्तुष्टिजनक नै छ । र, अर्को कुरा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय र हस्पीटालिटि म्यानेजमेन्टमा हासिल गरिने महत्वपूर्ण कुरा भनेको अनुभव हो । राम्रो अनुभव कमाए । सिक्ने मौका पाए । एकदमै खुसी छु ।
यहाँको व्यवसाय कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ?
मेरोमा नेपाली र अन्यत्रका कर्मचारीहरूसहित लगभग २० जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरू छन् । हामी सबै एकै परिवारका सदस्यझैँ मिलेर एकताभावले काम गरिरहेका छौ । को कामदार को साहुजी भन्ने भावना छैन हाम्रोमा । सबै कर्मचारीहरू खुसी छन् । सन्तुष्ट छन् । उनीहरूले गर्दा नै मण्डला रेस्टुरेन्ट राम्रोसँग चलिरहेको छ । अर्थात हाम्रोमा यो साहु, यो म्यानेजर भन्ने सिस्टम छैन । हामी सबै एकता, समानता र समताभावले काम गर्छौ । र, अर्को कुरा मेरोमा काम गर्न आउनुभएका नेपाली कर्मचारीहरू सबै म आफैले नेपाल गएर अन्तरवार्ता लिएर निशुल्करुपमा सामान्य २५ हजारभन्दा कम लागतमा आउनुभएको छ । उनीहरूलाई यहाँको नियमअनुसारको राम्रै सेवा सुविधा पनि दिइरहेको छु । उनीहरू पनि खुसी छन् । यसरी नै रेष्टुरेन्ट एकदमै व्यवस्थित तरिकाले चलिरहेको छ । थोरबहुत मानिसहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सके यो नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो ।
यहाँ रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा के कति लगानी गर्नुपर्छ । लगानी कसरी गर्न सकिन्छ ?
मैले यहाँ कतार आएर धेरै वर्ष काम गरेर बचत गरेको पैसा र थपथाप सरसापट गरेर यो व्यवसायमा लगानी गरेको हुँ । यो व्यवसायमा मेरो जम्मा जम्मी ८ लाख कतारी रियल लगानी भएको छ । अर्थात, नेपाली लगभग ३ करोड रकम लगानी भएको छ । यो लगानी मैले नेपालबाट आफ्नो पुख्र्याैली सम्पत्तिबाट ल्याएको हैन । यही कमाएको पैसा यही लगानी गरेको मात्र हुँ । यहाँ व्यवसाय गर्न यहाँको नियम कानून अनुसार सहज नै छ ।
तपाईँ यति लामो समयअवधिदेखि कतारमा रहँदै आउनुभएको छ । कतारमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ तपाईँको नजरमा ?
यहाँ विभिन्न प्रकारका घटनाहरु देखिन्छन । यहाँ मैले देखेको छु नेपालीहरूको सारा पीडा व्यथा । अरूको हाइ–हाइमा लागेर विदेश गएपछि त के–के नै हुन्छ भनेर भाषा, सिप, दक्षता र योग्यता नभएका मानिसहरू आएर दुःख पाएका पनि मैले देखेको छु । र, सिप र क्षमता भएका मानिसहरू आएर एकदमै राम्रो सन्तुष्टिजनक काम गरिरहेका पनि मैले देखेको छु । त्यसर्थ, म के भन्छु भने विदेश आउनुभन्दा पहिला सबैले उक्त देशबारे अध्ययन अनुसन्धान, त्यहाँको भाषा संस्कृति, कामकोलागि चाहिने सिप र क्षमता विकास गरेर आउनु भयो भने यहाँ कतारमा सबै नेपालीहरूलाई अवसर नै अवसर छन् । र, जहाँसम्म मैले बुझेको छु वा अनुभव गरेको छु, गल्फभरिकै कामदारहरुमध्य सबैभन्दा राम्रो अवस्था सायद कतारमा काम गर्ने नेपालीहरूकै छ । नीतिगतरुपमा एवं व्यावहारिक रूपमा पहिलेको भन्दा अहिले धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । कतार साँच्चै सुन्दर कर्मभूमि बनेको छ नेपालीहरूको ।
अन्तमा, सारा नेपालीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै नेपाली जो जहाँ रहेता पनि नेपाली भावनासहित एकताको सूत्रमा बाँधिएर आफू, आफ्नो परिवार र देशवासीको सुख, शान्ति र समृद्धिकोलागि एकजुट भई निरन्तर विकास र समृद्धिको बाटोमा जो सकेको योगदान गर्नुपर्दछ । धन्यवाद ।